Dabcan, wax badan ayaa lagu lafa guray siyaasada Soomaaliya shir merlo badan ka dhacay , wax natiijo oo Manaafacad leh ila haddana lama hayo .
Waxaana muuqato oo dhab ah damac baas ayaa heehaabayo korkeena sida daruuraha oo siyaasada Soomaaliya waa mid laga soo hago meel ka baxsan dalkeena , oo waa inuu cindiga gashanaa in dalkiisu ku jiro Gumeysi dadban oo aan marnaba laga dhoohnaan isha falato iyo indha habeenaadga la iska dhowraa. Waxuu , hadda ka hor qoray qoraaga lagu magacaabo Douglas Adam oo aan ifka joogin asagoo adeegsanayo culluunta sayniska ayuu qoray sheekooyin khiyaali ah oo aan dhab ahayn , wuxuuna adduunka ku tilmaamay oo noqday computer weyn oo carbis ku jiro.
Haddaba ,waxaad moodaaba inay Soomaalidu ku jirto carbiskaas amase laylis . Waxaa Sido kale Buug dhan ka qoray filoosoofarka Jean Baudillard ciwaankiisuna af-ingiriisi ah Simulacra and Simulation waa halka u aroorsi dhaansaday , waxaana ii Cadaatay in Soomaalidu ku jirto carbis amase laylis. Bal aan daaha ka rogo noocyada carbiska ee naloo adeegsaday :- Taxano.
Yaa muran ka hayaa inay Soomaalidu wada dhasheen ? Maxaase keenay tafaraaruqa dalkeena ? 1980gii waxaa soo fircamay jabhado qabiil wato magacyo afqalaad xambaarsan sida SSDF, SNM , USC iyo wixii la Hal maalo mid wailba waxaa xudunteeda lagu soo jaray dal Itoobiyo ila iyo haddana waxaa dhibka Soomaaliya laga soo hagaa meesha jabhadaha qabiilka wato ka soo unkameen.
2. Qabqable amase dagaal-ooge yaa ku keenay? 1990gii Soomaaliya waxaa soo if-baxay rag aan la aqoon daaqadaha ka soo galay markii danbana Dumarka iyo Caruurta dhexdooda ku dagaalay yaa qandaraas ka qaateen maantase soo ma aha kuwa baarlamaanka 500 dhaafay ku dhex hurdo.
3. Waxaad waalowow yaa ku keenay? Waxaa is weydin leh kuwa aan jus camo xifdin Karin misana dhiiga islaam baneeystay xagee ka yimaadeen?
4.Gomogoosato iyo Goobaleeysiyow yaa uu adeegtaa? Addenda xiliga la joogo oo sooba yaraaday inay qabiil ku gomogoostaan iyo ku goobaleestan.
5. Horta Shabaabow yaa ku dhalay? Xagee canaasiirtaas naga soo galeen? Xageebay hantida iyo hubka ka keeneen? Waa su'aalo weyn oo u baahan inla raad-raaco Amase loo aroor jarmaado.
6. BurcadBaddded ma dhaba dhalan Soomaaliyeed ayaa qafaashay markab weyn oo xamuul culus sito inay salaan La koreen ? Burcadbadeed yaa anqariyay oo ku habay inay noqdaan Guuto -Bahalo?
7.Dowladeey maxaa tahay? Xagee addunka lagu arkaa Dowlad madaxbanaanideeda la hor istaago la yiri waxaa awaamir ka qaadataa dalal ku fac ah? Carbiskaas intaanu ku jirno wax dowlad la yirraahdo Soomaaliyeey ha u hanqataagina inuu dalkiina saa ahaado ayaa la rabaa oo cidlo laga qaato dowlada badan ayuu hungurug hayaa ee hurdada ka kaca.